Faah faahin ku saabsan dagaalo ka dhacay gobolka Jubada hoose
Mogadishu Sabti 1 September 2012 SMC
Faah faahin ku saabsan dagaalo ka dhacay gobolka Jubada hoose.
Warar Ka imaanaka gobolka jubada hooe ayaa waxa ay sheegayaan in uu kadhacay dagaal Shalay galinkii dambe ayna ku qaadeen Ciidamo ka Tirsan Xarakada Al-Shabaaab Degmada Afmadoow ee G/Jubada Hoose Shabaabku na ay sheegeen in ay la wareegeen Afmadow ayaa waxaa Saake waxaa ka hadlay Dagaaladaasi Saraakiisha Ciidamada Dowlada ee Gobolkaasi.
Dad Kudhaqan degmada afmadow ayaa waxaa ay sheegeen in dagaaladii saacadihii u dambeeyay halkaasi ka dhacayay ay ka qeyb qaadanayeen diyaaradaha dagaalka ee laga leeyahay dalka Kenya kuwaasi oo duqeymo la dhacayay Xarumaha Al Shabaab ay ku leeyihiin deegaannadii shalay lagu dagaalamay.
Ku dhawaad 30-ruux oo ah dhinacyadii dagaalamay ayaa la sheegay inay ku dhinteen tiro intaasi ka badann ay ku dhaawacmeen sida ay sheegayaan dadka degaanka.
Jeneral Ismaaciil Saxar Diid oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dagaaladii shalay halkaasi ka dhacay qasarihii ugu badnaa ay ku gaarsiiyeen Ururka Al Shabaab, wuxuuna sheegay in Ciidamada Dowladda iyo kuwa Kenya saacadaha soo aaddan la wareegi doonaan Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose.